INDLELA YOKUTHANDAZA AMAWAKA AMAYESU NOKUQALA KWABO
Ukuba ufuna ukususa kwaye ugcine imikhosi yobubi kude nekhaya lakho, apha uya kufunda ngale njongo indlela yokuthandaza iwaka yesu, ephindaphinda igama likaYesu izihlandlo eziliwaka, ukongeza ekwazini imvelaphi yalo mthandazo. Ungaphoswa naziphi na iinkcukacha.
1 Indlela yokuthandaza kwiwaka lamaYesu?
1.1 Ekuqaleni kweshumi kwathiwa
1.2 Umthandazo wokugqibela
1.3 Umthandazo wesenzo sokuzisola
1.4 Umthandazo wewaka leyesu
1.5 Intsikelelo yokugqibela ngamanzi angcwele
2 Imbali emfutshane ngemvelaphi yoMhla woMnqamlezo oyiNgcwele
Indlela yokuthandaza kwiwaka lamaYesu?
Eli siko, elinemvelaphi yalo inxulumene nokubhiyozelwa kwe-Holy Cross, ngokwe-Archdiocese yaseBogotá, kwaye, inxulumene nokufunyanwa kwe-Santa Elena de la Cruz, eyindawo apho kukholwa ukuba wafela khona uYesu Krestu. Nangona kunjalo, kukho ababhali-mbali abajonga ukuba lo mbhiyozo uvela kwiminyhadala yamaRoma.
Umthandazo ujolise ekubizeni igama likaYesu izihlandlo eziliwaka; Kukwalisiko ukusebenzisa iminqamlezo, eqhelekileyo eyenziwe ngomthi okanye ngamasebe omnquma. Thandaza kwiwaka leeYesu Injongo yayo kukugxotha ububi emakhayeni, ukoyisa, ngegama leNkosi uYesu Krestu, imikhosi yobubi.
Ukwazi indlela yokuthandaza iwaka leyesu, Kufuneka yaziwe ukuba ngumthandazo olula, kodwa amanyathelo amancinci kufuneka alandelwe ukwenza ngokuchanekileyo. Ukuze siqonde ngcono ukusebenza kwala manyathelo alula, siza kubakhankanya kweli candelo, kodwa siya kugxininisa kwezona zibalulekileyo kubo.
Yenza isibingelelo ngeentyatyambo, amanzi angcwele, amakhandlela, kunye nomnqamlezo womthi okanye amasebe omnquma.
Yenza uphawu lomnqamlezo (ukuzinqumla).
Cwaka, siyaqhubeka nokubulela imisebenzi elungileyo kaKristu kubomi bomntu ngamnye othembekileyo. Ngokunjalo, wonke umKristu kufuneka acele ubabalo alunqwenelayo.
Yenza isenzo sokuzithoba.
Emva koko kufuneka thandaza uBawo Wethu.
Ngoncedo lwerosari, qala Bala iwaka leeyesu, ephinda "uYesu" ngentloko nganye yerosari.
Xa kugqitywa irosari, "uGloria", "uBawo wethu" kunye nomthandazo wokugqibela kuyatshiwo.
Xa kubalwa iirosari ezingama-20, uphela umthandazo wewaka likaYesu.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Umthandazo wegusha ethambileyo.
Ekuqaleni kweshumi kwathiwa
«Santísima Cruz, kufuneka ube ligqwetha lam, ebomini, nakwi ukufa, Kuya kufuneka undibabale. Ukuba ngexesha lokufa kwam uMtyholi undilingile, ndiza kuthi kuye: Sathana, Sathana, kunye nam awuyi kubala kwaye awuyi kuba nenxaxheba emphefumlweni wam, kuba ndathi uYesu izihlandlo eziliwaka ».
Ngale ndlela, igama likaYesu kufuneka liphindaphindwe amaxesha angama-50, ixesha ngalinye ngerosari nganye. Ekupheleni kwerosari, "uGloria", "uBawo wethu" kunye nomthandazo wokugqibela kufuneka wenziwe; Rhoqo xa kuqala ishumi elitsha, kuya kufuneka uthethe esinye sezi zivakalisi:
"Hlukana, Sathana, awunakundithemba, kuba ngoMhla woMnqamlezo oyiNgcwele, siphinda ngokholo iwaka likaYesu."
"Sathana, awuzokwazi ukungena ezindlwini zethu, kwaye awuzukulawula ezintliziyweni zethu, kuba ngomhla woMnqamlezo oyiNgcwele siyakuthi uYesu izihlandlo eziliwaka."
«Umnqamlezo ongcwele, wena, uphawu lwe Ubulungisa, ithathwa njengegqwetha lomntu ngamnye othembekileyo, oya kusinceda ngalo lonke ixesha. Yiyo loo nto sivuma ukuba siyazikhulula ebubini, kwaye iintshaba zethu azizukuthatha nxaxheba kuthi, kuba sinokholo lokuzinikela sithe kaliwaka uYesu ".
Siyakuthanda, Owu Nkosi Yesu Krestu, kwaye siyakusikelela, ngomnqamlezo oyiNgcwele ulikhulule ihlabathi. NguYesu, uYesu, uYesu Krestu. Owu! Yesu, Yesu wam ngonaphakade. Yesu, Yesu ebomini bam, Yesu, Yesu ekufeni kwam. Yesu olungileyo, yiba nguYesu wam kwaye usisindise ».
Umthandazo wesenzo sokuzisola
«Owu Nkosi Yesu Kristu, Thixo, indoda eyinyani, uMdali, nomhlawuleli wam; Ngokuba nguwe, onentliziyo entle, ngokuba ungubani ngenene, kwaye kuba ndikuthanda ngokungapheliyo ngentliziyo yam yonke, ndiyazisola ngentliziyo yam yonke nangokuhlala kwam ngenxa yobubi endibenzileyo, nangokulungileyo endiyekile ukukwenza, nangona ngendikonile.
«Ndiyathembisa ukunikela ngobomi bam ukoneliseka zizono zam, kwaye ngoncedo lwakho, ndiyathembisa ukuba andisayi kuphinda ndone kwakhona, kwaye ndiza kuphuma kuso nasiphi na isono esifuna ukundibambisa. Ndiza kusivuma sonke isono, ngaphandle kokushiyeka, kwaye ndiza kuthatha umthendeleko; Yiba nenceba kum nakumphefumlo wam, kwaye undiphe amandla akho ukuze ndingaphindi ndikucaphukise. "
Umthandazo wewaka leyesu
«Owu, Nkosi, ukuba kwinkumbulo yokufunyanwa komnqamlezo oyinyani uphinde umise yonke imimangaliso yothando lwakho. Nkosi, sinike, ngexabiso lesiphelo sobomi esikelelekileyo, intsikelelo yokufikelela kuncedo kunye nesibonelelo sobukumkani bamazulu, kwaye usinike ubomi obungunaphakade. NgeNkosi yethu uYesu Krestu, ophila olawula kunye nawe ngonaphakade kanaphakade, amen. "
Intsikelelo yokugqibela ngamanzi angcwele
"INkosi mayibe nani."
Impendulo: "Kwaye ngoMoya wakho."
"Intsikelelo kaThixo uSomandla, uYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele."
Imbali emfutshane ngemvelaphi yoMhla woMnqamlezo oyiNgcwele
Ababhali-mbali bathi, phakathi kwezandulela zoSuku loMnqamlezo ongcwele, inxenye yembali yomlawuli waseRoma owaziwa njengoConstantine I Omkhulu, onemvelaphi yobuhedeni, ekhunjulwa njengomlawuli wokuqala waseRoma owavumela unqulo olukhululekileyo lwamaKrestu.
Ngonyaka ka-312 emva koKrestu, uConstantine kwafuneka ajongane nedabi elinzima nxamnye nomkhosi wotshaba, owawukhokelwa nguMaxentius. Ibali lithi uConstantine wayenombono otyhilayo ngaphambi kokwenza idabi nembangi yakhe.
Ngokomgaqo, ngexesha lokuhamba kunye namajoni akhe, umlawuli wajonga esibhakabhakeni, phambi koApollo (ilanga), Umfanekiso womnqamlezo wobuKristu. Emva kwexesha, ngexesha lephupha, umnqamlezo watyhilwa kuye kwakhona, kodwa ngeli xesha ngegama elithi "In hoc signo vinces" (Ngale mqondiso uya koyisa).
Ngale ndlela, uConstantine wayalela ukuba umkhosi wakhe uphathe uphawu lomnqamlezo kwiibhena kunye namakhaka abo, kwaye kamva woyisa uMaxentius. Emva kwesi siganeko, umlawuli waseRoma waguqukela ebuKristwini, ngaphezu kokuvumela amaKristu ukuba anqule ngenkululeko epheleleyo.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi nge indlela yokuthandaza iwaka yesuSiyakumema ngokufudumeleyo ukuba ubukele ividiyo kule khonkco ilandelayo, apho yonke into ekufuneka yenziwe kunye nenkqubo yayo icacisiwe ngokweenkcukacha:
Isidlo sasemoyeni Yintoni le? Ungayiphumeza njani? kunye nokuninzi
Yintoni isono sokuqala? Kutheni ikhona? Kwaye okuninzi